Suniel Shetty filimkiisa aan la hadleynin oo shaqadiisa dhawaan bilaaban doonto – Filimside.net
Suniel Shetty filimkiisa aan la hadleynin oo shaqadiisa dhawaan bilaaban doonto
September 3, 2017 Zakarie Abdi
Taariikhda: September 3, 2017
Waxaan horey idin kula wadaagnay in ruug cadaa Suniel Shetty uu saxiixday filim dhamaan jilaayasha ku jiro aysan hadleyn kaliya ficilo sameenayaan.
Haatan mashruucaan la yaabka leh xiliga laga hawl galaayo ayaa soo dhawaatay sidoo kalena waa filim 25-jilaa oo dhamaan shirkadaha Hindiya ka tirsan wax ka jili doonaan.
Qorshaha awal wuxuu ahaa in filimkaan hal maalin lagu duubo balse hada kooxda Director-da ka ah waxay sheegeen in shaqadaas dhib badan tahay madaama fariintaan jaceylka iyo shactirada isku jirto isku xirkeeda dhib badan tahay.
Director Ananth Mahadevan ayaa sameyn doono qayb ka mid ah filimkaan halka filim sameeyaal kale oo Koonfur Hindiya kasoojeedaan isku daba ridi doonaan qaybaha kale.
Jadwalka kowad filimkaan waxaa lagu duubi doonaa Malaysia dhamaadka bisha dambe October halka jadwalka labaadna dalka Mauritius lagu duubi doono ugu dambeyntiina gudaha Hindiya ayaa shaqadiisa lagu soo gaba gabeyn doonaa.
Filimkaan aan magaca loo bixinin waxaa Director ka ah Anant, Lateef Binny, Sanjay Khanna iyo Dharam Pal waxaana lagu daawan doonaa luqadaha Hindi, Tamil iyo Telugu wuxuuna Suniel ka mid yahay hogaamiyaasha filimkaan aan la hadleynin ee kaliya ficil la sameenayo!
Waxaa Aqrisay 448